Galmada badan waxay u roontahay raga da'da ah wadnahooda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Galmada badan waxay u roontahay raga da'da ah wadnahooda
La daabacay fredag 15 februari 2013 kl 15.00
Labo goor ugu yaraan asbuucii hadii ay raga da'da ah galmoodaan waxay ka yareyn kartaa qatarta ah in ay ku dhacdo cudurada ku dhaca wadnaha iyo wadno xanuunka, ku dhawaad boqolkii 45 prosenti, sidaas waxaa muujinaya cilmi baaris.
In ay galmada u fiicantahay caafimaad ma ahan wax cusub, laakiin ma aysan jirin hada ka hor cilmi baaris sidaas cadeyneysa. Balse hada cilmi baariss ay arintaan ku sameysey rugta New England Research Intitute ee dalka Mareykanka ayaa lagu ogaadey in galmada ay caafimaadka u fiicantahay, gaar ahaan raga da'da ah. Rugta waxay cilmi baaristeeda ku sameysey rag gaaraaya 1 000 oo da'dooda u dhaxeyso 40 ilaa 70 sanno, ayada oo rugto daraasad ku sameysey hab dhaqankooda galmo, sida ay qortey Wargeyska The Telegraph.
Mudo 16 saano ah ayey ragaan si joogta ah uga jawaabayeen su'aalo la xiriira inta goor oo ay la golmoodaan lamaanahooda, sidoo kale cilmi baarayaasha ayaa u kuu-galayey caafimaadkooda wadnaha.
Natiijada cilmi baaristaan oo lagu daabacey wargeyska American Journal of Cardiology ayaa muujineysa in raga galmooda ugu yaraan labo goor asbuucii ay aad uga yartahay qatarta ah in ay la soo gudboonaato cudurada wadnaha ku dhaca marka loo barbardhigo raga galmooda halmar bishii.